Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » Nnwere onwe dị n'ịntanetị na -agbada nke ọma maka afọ nke 11 n'usoro
Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Crime • omenala • Education • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Entertainment • fim • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • LGBTQ • Music • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Na mkpokọta, opekata mpe mba 20 gbochiri ịntanetị ịntanetị ndị mmadụ n'etiti June 2020 na Mee 2021, oge nyocha ahụ kpuchitere.
Ndị ọrụ ịntanetị n'ụwa niile na -eche mmekpa ahụ, njide na mwakpo anụ ahụ maka ọrụ ịntanetị ha.
Akụkọ nnwere onwe nke Net na -enye mba otu akara n'ime 100 maka ọkwa nnwere onwe ịntanetị nke ụmụ amaala nwere.
N'afọ 2021, ndị ọrụ chere mwakpo anụ ahụ ihu na ntaramahụhụ maka ọkwa ha n'ịntanetị na mba 41.
Nnwere onwe dị n'ịntanetị belatara n'ụwa niile maka afọ nke 11 n'usoro, dị ka akụkọ "Freedom on the Net" kwa afọ, bipụtara taa.
Na -ese foto dị oke egwu nke nnwere onwe dijitalụ na 2021, akụkọ ahụ kwuru na ndị na -eji ịntanetị n'ọtụtụ mba na -enwe mmerụ ahụ, njide, mkpagbu iwu, mwakpo anụ ahụ na ọnwụ maka ọrụ ịntanetị ha n'afọ gara aga.
Nkwupụta ahụ kwuru na mkpọchi ịntanetị na Mianmaa na Belarus egosila ebe dị ala n'ụdị nsogbu na -ebelata nnwere onwe ikwu okwu n'ịntanetị.
Ụlọ ọrụ Freedom House nke United States chịkọtara, akụkọ a na-enye mba ntaramahụhụ n'ime 100 maka ọkwa nnwere onwe ịntanetị nke ụmụ amaala nwere, gụnyere ókè ha na-eche mgbochi na ọdịnaya ha nwere ike ịnweta.
Ihe ndị ọzọ gụnyere ma trolls na-akwado gọọmentị na-achọ ịchịkwa arụmụka ịntanetị.
"N'afọ a, ndị ọrụ chere mwakpo anụ ahụ ihu na ntaramahụhụ maka ọrụ ịntanetị ha na mba 41," ka akụkọ ahụ kwuru, "ndekọ dị elu" ebe nsuso ahụ malitere afọ 11 gara aga.
Ọmụmaatụ gụnyere nwa akwụkwọ Bangladesh nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe a kụrụ ya ihe maka ebubo "mmegide gọọmentị" na soshal midia, na onye nta akụkọ Mexico gburu mgbe o biputere vidiyo Facebook na-ebo otu ndị ogbu mmadụ ebubo.
Ọzọkwa, ejidela ndị mmadụ ma ọ bụ maa ha ikpe maka ihe omume ịntanetị ha n'ime 56 n'ime mba 70 akụkọ ahụ kpuchiri - ndekọ pasent 80.
Ha gụnyere ndị Ijipt abụọ na -eme ihe ike tụrụ mkpọrọ na June maka ịkekọrịta vidiyo TikTok nke gbara ụmụ nwanyị ume ịchụso ọrụ na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta.